ရော်ဘင် DR400 Regents FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 4.99 ကို MB
downloads ရယူရန္7970
Yannick Lavigne, Fred သည် Banting, ရော့လူငယ်အဲရစ် Dante Jean-ierre Bourgeois
Add-on ၏ အရည်အသွေးကောင်း နှင့် 2D panel က နှင့် ပြည့်စုံသော VC, ဒီ လေယာဉ်ပျံ တစ်ဦးနှင့်အတူပူဇော်သော ထူးခြားသော livery F- မှတ်ပုံတင်GNNK. ဒါကြောင့်အဲဒီမှာကျောင်းတွေပျံနေဖြင့်အသုံးပြုမှုအတွက်အများဆုံးကျယ်ပြန့်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ပြင်သစ်လေယာဉ်မှူးများ၏အများစုဖြစ်နိုင်ရော်ဘင် DR.400 အနည်းဆုံးနာရီအနည်းငယ်ရှိသည်။
modeling Yannick Lavigne, Fred Banting ပရိုဂရမ် တူရိယာများနှင့် ရော့လူငယ် ဖွံ့ဖြိုးပြီးခဲ့သည် လေယာဉ်စာအိတ်.
၏လိုက်လျောညီထွေ အမြင်အာရုံမော်ဒယ် FS2004 များအတွက် by အဲရစ် Dante
လိုက်လျောညီထွေ လေယာဉ်မော်ဒယ်၏ FS2004 များအတွက် by Jean-Pierre ၏ Bourgeois
၏ဖော်ပြချက် စစ်မှန်သောလေယာဉ်ပျံ :
အဆိုပါရော်ဘင် DR400 Pierre ၏ရော်ဘင်နှင့်ဂျင်းDélémontezအားဖြင့်ပဋိသန္ဓေနေတဲ့သစ်သားအားကစား monoplane ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရော်ဘင် DR400 ပထမဦးဆုံး 1972 အတွက်ပျံသန်းနှင့် 2008 အတွက်ထုတ်လုပ်မှုနေဆဲပဲ။ ဒါဟာသုံးဘီးဆိုင်ကယ် undercarriage ရှိပါတယ်, နှင့်လူလေးသယ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ DR400 လေယာဉ်ပြင်တောင်ပံ၏ dihedral ထောင့်, သူတို့ Jodel လေယာဉ်ပျံနှင့်အတူမျှဝေသော configuration ကိုအ inboard ထက်အများကြီးကြီးမြတ်သည့်အတွက် configuration ကို, '' တောင်ပံ cranked '' ရှိသည်။ ဒီမော်ဒယ်က၎င်း၏သစ်သားဘောင်များကြောင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာအများအပြားနှင့်ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းဖြင့်ပျံသန်းဖို့မလွယ်ကူစဉ်းစားသည်။
အဆိုပါရော်ဘင် DR300 စီးရီးတစ်ခုသုံးဘီးဆိုင်ကယ်ဆင်းသက်ဂီယာနှင့်အတူအစောပိုင်း DR.221 Dauphin နှင့် DR.250 Capitaine ၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရှိကြ၏။ ပထမဦးဆုံးအမူကွဲအ DR340 ဗိုလ်မှူး, ပထမဦးဆုံး 250 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27 အပေါ်ပျံသန်းသော DR1968 Capitaine တစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ဆင်းသက်ဂီယာဗားရှင်း, အ DR21 အသနားခံစာမင်းသား, အ DR1968 Dauphin တစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ဆင်းသက်ဂီယာဗားရှင်းအားဖြင့် 315 မတ်လ 221 အပေါ်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ DR315 နောက်ပိုင်းတွင် DR300 ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ 1972 အတွက်တိုးတက်လာသောဗားရှင်း, အ DR400 တစ်ဦးရှေ့ကို-လျှောမြတ်သောနှင့်အတူစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ပံအရော်ဘင် DR400 တစ်ထူးခြားတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ချက်ခြင်းတခြားအလားတူအလင်းလေယာဉ်မှအမြင်အာရုံကဒီလေယာဉ်ပျံကိုခြားနားစေသောအရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအစောပိုင်း Jodel ဒီဇိုင်းများတစ်ဆင်းသက်လာသည်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်သိသိသာသာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တည်ငြိမ်မှုပေးခြင်းပြင်ပြား၏ dihedral နှင့်တကွ, အလင်းခိုင်မာသောနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖြစ်ပါတယ်။ ထည်ဖုံးလွှမ်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်သတ္တုလေယာဉ်ပေါ်တွင်တွေ့ရသောပုံမှန်ထပ်ပြားသို့မဟုတ် rivets အားဖြင့်မရှိ Airflow, ကူညီတဲ့ချောမွေ့မျက်နှာပြင်တင်ပြသွားပါသည်။ အ DR400 ရဲ့အတော်လေးမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်ပြင်ပြားအတွက်အသံထွက် washout တည်ရှိသည်။ သူတို့ကအလယ်ဗဟိုအပိုင်းတွေထက် Airflow မှတိုက်ခိုက်တဲ့အနိမ့်ထောင့်ရှိကတည်းကသူတို့ခရုဇ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်လျော့နည်းဆွဲဖန်တီးပါ။ ဒီလက္ခဏာလည်းမဟုတ်ဘဲညင်သာပျော့ပျောင်းတင်းကုပ်အပြုအမူ imbues နှင့် DR400 အကျိုးဆက်ဦးဆောင်အစွန်းတင်းကုပ် strips တွေတူ retro-ပြုပြင်မှုများကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းမှမခံစားဘူး။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
Author: Yannick Lavigne, Fred သည် Banting, ရော့လူငယ်အဲရစ် Dante Jean-ierre Bourgeois